မိန်းကလေးများအားလုံး ချစ်တော့ချစ်ပါ စိတ်ကို အလိုမလိုက်ပါနဲ့ – A one
မိန်းကလေးများအားလုံး ချစ်တော့ချစ်ပါ စိတ်ကို အလိုမလိုက်ပါနဲ့
ကျမ ဆေးဆရာမ တစ်ယောက်ပါ။” မနေ့က ကျမရဲ့ ဆေးခန်းကို မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး မကြာခင်မှာ ဆုံးသွားတယ်။အကြောင်းရင်းကို သူ့ကိုယ် လိုက်ပို့တဲ့ သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးဟကိုယ်ဝန်ရှိတော့ ထားခဲ့တယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်သူမှမသိအောင်ဖျက်ချတယ်။ နည်းစနစ်မမှန်တော့ တချောင်ချောင်နဲ့ ဖျားတယ်။သူ့အမေနဲ့ အိမ်နီးနားချင်းတွေကရိုးရိုးဖျားတယ်ထင်ကြတယ်။အချိန်လွန်မှ ကျမဆေးခန်း လာပြတယ်။သူမဟာ ပိုးဝင်ပြီး ဆုံးသွားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ကျမဆေးခန်းလာပြီး ကလေးဖျက်ခိုင်းတယ်။
ဖျက်မချပေးလို့ ဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်သွားပြန်တယ်။ပြောရင်တော့အများကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့် နောက်ကို ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်အောင် အမျိုးသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာတဲ့အနေနဲ့ ကျမတို့တွေ တိုင်ပင်ပြီး” မြင်မိုရ်ဂေဟာ” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ဖခင်မဲ့မွေးချင်တဲ့ မိန်းကလေးများအတွက် အခမဲ့ ဖွင့်ထားပါတယ်။
ခုဆို မွေးလူနာပေါင်း ၁၀၀မျှရှိနေပါပြီးတဲ့။ဒီအကြောင်းရာတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ကျမရဲ့ သမီးလေးတွေကို ခုလိုဆုံးမစကား ပြောရပါတယ်။” ဒီမယ် သမီးတို့ မှတ်ထားပါ။အမေတို့လိုမိန်းမသားတွေဟာ အများသောအားဖြင့်ဘဝ လေးမျိုးကိုဖြတ်သန်းရတယ်။
၁) ကလေး ဘဝ၂) အပျို ဘဝ၃) အအို ဘဝ၄) မိခင် ဘဝဆိုပြီး ဘဝကို လေးမျိူးနဲ့ရပ်တည်ရတယ်။အေး ကောင်းပြီ ဒီမိန်းကလေး(၄)မျိုးကို နောက်ထပ်မိန်းမ (၃)မျိုး ထပ်ခွဲပါတယ်။ပထမ မိန်းမအမျိုးစားကသူတို့ရဲ့ မျက်နှာအလှနှင့် ခန္ဓာကိုအရေပြားပေါ်မှာ ဆေးရောင်စုံခြယ်သပြီးဘဝကို ရပ်တည်တဲ့ မိန်းမသားမျိူး။
(သူတို့ကို မော်ဒန်နှင့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလို့ဆိုပါစို့)ဒုတိယ မိန်းမ အမျိူးစားကသူ့တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းအပြင်ကိုအရင်းတည်ပြီး ယောက်ျားကြီးငယ်တို့၏ကာမ ရမ္မက်ကို ဖြည့်စီးပေးရင်း စီးပွှားရှာ၍ ဘဝကို ရပ်တည်တဲ့ မိန်းမသားမျိုး။( သူတို့ကို ပြည်တန်းဆာ မိန်းမမျိုးလို့ဆိုပါစို့)
တတိယ မိန်းမ အမျိုးစားကတော့အသိပညာ|အတတ်ပညာကို အခြေခံပြီး ဘဝကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရပ်တည်နေကြတဲ့မိန်းမဆိုပြီး လောကကြီးမှာ မိန်းမ ၃မျိုးရှိတယ် သမီး။မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ဥပမာစာမျက်နှာ (၇၅)ရွက်ပါတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုရင်အသက်(၁၄)နှစ်ကနေ (၂၅)နှစ်အတွင်းမှာ အထူး သတိထားရေးသားဖို့လိုပါတယ်။
ဒါမှသာ နောက် လှန်ကြည့်မဲ့ စာမျက်နှာတွေဟာ လှပလာမှာပါ။ “အမေကလည်း တချို့ မိန်းကလေးတွေဆို အသက်က(၂၀)မပြည့်သေးဘူး ရည်းစားက (၅)ယောက်လောက် ထားပြီးပြီ။””ဒီမယ်သမီး ဒါတွေကို အားမကျပါနဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့ ကွဲသွားလို့သူနဲ့အတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုပျောက်ပျက်လိုက်ပေမဲ့
သူရဲ့ ပုံရိပ်တွေက သမီးရဲ့ အနာဂတ်တွေကိုဖျက်စီးပြစ်နိူင်တယ်နော်။”” ဒီမယ် သမီးလေး မှတ်ထားပါ။လောကမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဣနြေ္ဒသိက္ခာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် ညအခါမှာ ကောင်းကင်ကနေ အလင်းပေးနေတဲ့ လမင်းလေးနဲ့တူပါတယ်။
တစ်ရက်နဲ့ တစ်ရက် ပိုပိုပြီး လင်းလက်တောက်ပလာမယ်။သို့သော် မိမိရဲ့ သိက္ခာတရားတွေအားလုံးကို ဆန္ဒနဲ့ လဲမိရင်တော့လဆုတ်လကွယ်ညတွေလို ကြာလေမှောင်လေ| ကြာလေဘဝအမှောင်ကြီးထဲကိုကျသွားတတ်တယ်ဆိုတာ သမီးလေးတို့ မမေ့ပါနဲ့။ဒါကြောင့် သမီးလေးတို့ရဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ဘဝ စာမျက်နှာတိုင်းမှာ သမိုင်းကောင်းများရေးထိုးနိူင်ပြီး မိမိရဲ့ ခန္ဓာ|မိမိရဲ့ လိပ်ပြာကို ဖြူစင်သန့်ရှင်းနေအောင် ကြိုးစားထားနိူင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။မေတ္တာဖြင့်Z. C ( ရွှေကုန်းရွာ )
မိနျးကလေးမြားအားလုံး ခဈြတော့ခဈြပါ စိတျကို အလိုမလိုကျပါနဲ့
ကမြ ဆေးဆရာမ တဈယောကျပါ။” မနကေ့ ကမြရဲ့ ဆေးခနျးကို မိနျးကလေးတဈယောကျ ရောကျလာပွီး မကွာခငျမှာ ဆုံးသှားတယျ။အကွောငျးရငျးကို သူ့ကိုယျ လိုကျပို့တဲ့ သူငယျခငျြးကိုမေးကွညျ့တော့ဒီမိနျးကလေးရဲ့ ခဈြသူကောငျလေးဟကိုယျဝနျရှိတော့ ထားခဲ့တယျ။
ဒီတော့ ကိုယျဝနျကို ဘယျသူမှမသိအောငျဖကျြခတြယျ။ နညျးစနဈမမှနျတော့ တခြောငျခြောငျနဲ့ ဖြားတယျ။သူ့အမနေဲ့ အိမျနီးနားခငျြးတှကေရိုးရိုးဖြားတယျထငျကွတယျ။အခြိနျလှနျမှ ကမြဆေးခနျး လာပွတယျ။သူမဟာ ပိုးဝငျပွီး ဆုံးသှားတယျ။နောကျတဈယောကျကလညျး ကမြဆေးခနျးလာပွီး ကလေးဖကျြခိုငျးတယျ။
ဖကျြမခပြေးလို့ ဆိုပွီး သူ့ကိုယျသူ အဆုံးစီရငျသှားပွနျတယျ။ပွောရငျတော့အမြားကွီးပါပဲ။ဒါကွောငျ့ နောကျကို ဒီလိုမြိုးပွဿနာတှဖွေဈအောငျ အမြိုးသမီးခငျြး ကိုယျခငျြးစာတဲ့အနနေဲ့ ကမြတို့တှေ တိုငျပငျပွီး” မွငျမိုရျဂဟော” ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ဖခငျမဲ့မှေးခငျြတဲ့ မိနျးကလေးမြားအတှကျ အခမဲ့ ဖှငျ့ထားပါတယျ။
ခုဆို မှေးလူနာပေါငျး ၁၀၀မြှရှိနပေါပွီးတဲ့။ဒီအကွောငျးရာတှကေို သငျခနျးစာယူပွီး ကမြရဲ့ သမီးလေးတှကေို ခုလိုဆုံးမစကား ပွောရပါတယျ။” ဒီမယျ သမီးတို့ မှတျထားပါ။အမတေို့လိုမိနျးမသားတှဟော အမြားသောအားဖွငျ့ဘဝ လေးမြိုးကိုဖွတျသနျးရတယျ။
၁) ကလေး ဘဝ၂) အပြို ဘဝ၃) အအို ဘဝ၄) မိခငျ ဘဝဆိုပွီး ဘဝကို လေးမြိူးနဲ့ရပျတညျရတယျ။အေး ကောငျးပွီ ဒီမိနျးကလေး(၄)မြိုးကို နောကျထပျမိနျးမ (၃)မြိုး ထပျခှဲပါတယျ။ပထမ မိနျးမအမြိုးစားကသူတို့ရဲ့ မကျြနှာအလှနှငျ့ ခန်ဓာကိုအရပွေားပျေါမှာ ဆေးရောငျစုံခွယျသပွီးဘဝကို ရပျတညျတဲ့ မိနျးမသားမြိူး။
(သူတို့ကို မျောဒနျနှငျ့ ရုပျရှငျမငျးသမီးလို့ဆိုပါစို့)ဒုတိယ မိနျးမ အမြိူးစားကသူ့တို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အတှငျးအပွငျကိုအရငျးတညျပွီး ယောကျြားကွီးငယျတို့၏ကာမ ရမ်မကျကို ဖွညျ့စီးပေးရငျး စီးပှားရှာ၍ ဘဝကို ရပျတညျတဲ့ မိနျးမသားမြိုး။( သူတို့ကို ပွညျတနျးဆာ မိနျးမမြိုးလို့ဆိုပါစို့)
တတိယ မိနျးမ အမြိုးစားကတော့အသိပညာ|အတတျပညာကို အခွခေံပွီး ဘဝကို အဓိပ်ပါယျရှိရှိ ရပျတညျနကွေတဲ့မိနျးမဆိုပွီး လောကကွီးမှာ မိနျးမ ၃မြိုးရှိတယျ သမီး။မိနျးကလေး တဈယောကျဟာ ဥပမာစာမကျြနှာ (၇၅)ရှကျပါတဲ့ စာအုပျတဈအုပျဆိုရငျအသကျ(၁၄)နှဈကနေ (၂၅)နှဈအတှငျးမှာ အထူး သတိထားရေးသားဖို့လိုပါတယျ။
ဒါမှသာ နောကျ လှနျကွညျ့မဲ့ စာမကျြနှာတှဟော လှပလာမှာပါ။ “အမကေလညျး တခြို့ မိနျးကလေးတှဆေို အသကျက(၂၀)မပွညျ့သေးဘူး ရညျးစားက (၅)ယောကျလောကျ ထားပွီးပွီ။””ဒီမယျသမီး ဒါတှကေို အားမကပြါနဲ့ ရညျးစားတဈယောကျနဲ့ ကှဲသှားလို့သူနဲ့အတူ တှဲရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံတှကေိုပြောကျပကျြလိုကျပမေဲ့
သူရဲ့ ပုံရိပျတှကေ သမီးရဲ့ အနာဂတျတှကေိုဖကျြစီးပွဈနိူငျတယျနျော။”” ဒီမယျ သမီးလေး မှတျထားပါ။လောကမှာ ကိုယျကငျြ့တရားနှငျ့ ဣန်ဒွသေိက်ခာနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျဆိုရငျ ညအခါမှာ ကောငျးကငျကနေ အလငျးပေးနတေဲ့ လမငျးလေးနဲ့တူပါတယျ။
တဈရကျနဲ့ တဈရကျ ပိုပိုပွီး လငျးလကျတောကျပလာမယျ။သို့သျော မိမိရဲ့ သိက်ခာတရားတှအေားလုံးကို ဆန်ဒနဲ့ လဲမိရငျတော့လဆုတျလကှယျညတှလေို ကွာလမှေောငျလေ| ကွာလဘေဝအမှောငျကွီးထဲကိုကသြှားတတျတယျဆိုတာ သမီးလေးတို့ မမပေ့ါနဲ့။
ဒါကွောငျ့ သမီးလေးတို့ရဲ့ ကနျြရှိနတေဲ့ဘဝ စာမကျြနှာတိုငျးမှာ သမိုငျးကောငျးမြားရေးထိုးနိူငျပွီး မိမိရဲ့ ခန်ဓာ|မိမိရဲ့ လိပျပွာကို ဖွူစငျသနျ့ရှငျးနအေောငျ ကွိုးစားထားနိူငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။မတ်ေတာဖွငျ့Z. C ( ရှကေုနျးရှာ )
သင့်ကို အသက်နဲ့အမျှချစ်တဲ့ ယောကျာ်းတွေရဲ့လက္ခဏာ (၅) မျိုး
ယနေ့အချိန်ထိ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့နိမိတ်တွေ…
ကမ်ဘာ့နိုငျငံအနှံ့အပွားကအစိုးရ ခေါငျးဆောငျတှကေို အိတျဖှငျ့ပေးစာတစောငျရေးသားလိုကျတဲ့ မငျးသားခြော ပိုငျတံခှနျ.
နိုငျငံ့အရေး မှာ နှုတျဆိတျနေ တဲ့ အလှမယျ ‘ဝိုငျးလေး’ ကို အလှမယျ လောကမှ ဝိုငျးဝနျး ရှုတျခပြိတျပငျလိုကျ